Tsy nisy maty: horohoron-tany mahery tany Gresy, Sipra ary Torkia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Gresy » Tsy nisy maty: horohoron-tany mahery tany Gresy, Sipra ary Torkia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Chypre • Vaovao Mafana Egypt • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Tsy nisy maty: horohoron-tany mahery tany Gresy, Sipra ary Torkia.
Nisy horohoron-tany mahery roa nanenjika an'i Kreta tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, namono olona iray sy trano nanimba. Nilaza ny seismology grika iray fa avy amin'ny lesoka afrikanina hafa ilay horohoron-tany tamin'ny talata ary tsy nisy horohoron-tany nantenaina.
Ny haben'ny horohorontany dia norefesina tamin'ny 6 ary ny halaliny dia 37.8km (23.5 miles) tamin'ny fanadihadiana nataon'ny tany amerikana.
Ny manampahefana tiorka misahana ny loza voajanahary, Afad, dia nitatitra ny ivon-toerany tany 155km miala ny morontsirak'i Torkia.
Ny horohoron-tany nahatratra 6 metatra mialoha dia nitranga tany amin'ny 155km (96 miles) miala ny tanànan'i Kas, any amin'ny faritanin'i Antalya.
Horohoron-tany mahery vaika 6 nahatratra XNUMX tany amin'ireo firenena maro tany amin'ny faritra atsinanan'i Mediterane anio alina.
Ny horohoron-tany dia nampihorohoro ny nosy maro tany Gresy sy ny faritra hafa tany atsinanan'ny Mediteraneana, anisan'izany ny faritra atsimon'i Antalya any Torkia ary koa tanàna any Egypt.
Ny horohoron-tany dia tsapa tany amin'ny nosy Karpathos, Crete, Santorini ary Rhodes any Greece tamin'ny Alatsinainy.
Ny horohoron-tany koa dia nampihorohoro ny renivohitr'i Sipra Nicosia, Beirut any Libanona, Kairo ary tanàna hafa any Egypt, faritra israeliana ary ireo faritany palestiniana, ary ny faritra manodidina an'i Antalya atsimon'i Torkia.
Nilaza i Afad fa nisy horohoron-tany nahatratra 6 metatra teo alohan'ilay tanàna fialantsasatra tao Kas, any amin'ny faritanin'i Antalya.
Ny governoran'ny distrikan'i Kas, Saban Arda Yazici, dia nilaza fa tsy mbola nahazo tatitra momba ny fahasimbana na ratra ny manam-pahefana tao Kas na ny manodidina azy.
Ny herinandro lasa teo dia nisy horohoron-tany 6.3 tamin'ny maridrefy teo akaikin'ny olona Kreta. Tsapa ho lavitra an'i Atena renivohitra grika, 400km eo ho eo (249 miles) eo ho eo.
Telo herinandro lasa izay, nisy horohoron-tany mafy toy izany koa tany Kreta namono olona iray.
Torkia, mandritra izany fotoana izany, dia mipetraka eo an-tampon'ny tsipika hadisoana lehibe ary matetika dia misy horohoron-tany. Olona 17,000 farafahakeliny no maty tamin'ny horohoron-tany mahery tany avaratr'i Torkia tamin'ny taona 1999.
Vorona io… fiaramanidina io……
Singapore sy India dia nanao fifanarahana vaovao momba ny sidina
Ny CMA CGM Group dia mividy entana Airbus A350F efatra vaovao
Amazing Thailand dia misokatra ho an'ireo mpitsidika amin'ireo 45 ...
Hawaiian Airlines dia manendry tale mpitantana vaovao roa
Afaka misoroka ny homamiadan'ny nono aloha ny marary...
Boeing nanosika entana vaovao 737-800BCF
Vondrona Ascott Sun: fiaraha-miasa vaovao - ary inona ...
Ny filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina dia handray anjara amin'ny...
Inona no tokony ho fantatrao momba ny mifindra any Dubai
Ny IMEX BuzzHub Live vaovao dia manolotra varavarankely amin'ny tontolon'ny...